Portable Gasoline Generator 0.50KW-0.75KW
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များအတွက် ပူစရာမလိုဘူးနော် အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး တွေရှိပါတယ် စက်ရုံလုပ်ငန်းသုံး များသာမက ရုံးသုံး အလတ်စားများနဲ့ အိမ်သုံးအသေးစား များရှိပါတယ် ဒီဇယ် သုံးဖြစ်တာကြောင့်ရေရှည်ကုန်ကြမှုစရိတ်ကို အထူးလျော့ချပေးပါတယ် အိမ်သုံးလုပ်ငန်းသုံးရရှိနိုင်ပါသည် ။
Harmony Power New Generator sound proof2units မီးစက်
ကျွန်တော်များ Royal Hercules Power Co.,Ltd. မှ HARMONY POWER Brand မီးစက်များအား 5KVA မှ 2000KVA အထိ Open Type, Silent Type များအား အာမခံဖြင့်တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိပြီး စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်မားဆုံးနှင့် အရည်အသွေးမှာအထူးယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်။ လူကြီးမင်းများ လိုအပ်ချက်များ၊ အသေးစိတ်သိလိုသည်များ ရှိပါလျင် 095051682,09965051682, 09785051682 နှင့် 09795051682 များသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Sales, Service &amp; Rental များအား ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
P7.5-4S Generator (လုပ်ငန်းသုံး မီးစက်)
F9.5-1 generator (လုပ်ငန်းသုံးမီးစက်)
Harmony Power Diesel 25 KVA Generator Set
စက်ရုံလုပ်ငန်းသုံး စက်ကြီးများသာမက ရုံးသုံး အလတ်စားများနဲ့ အိမ်သုံးအသေးစား များ အတွက် အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး Harmony Power Generators များ ရှိပါတယ် . ဒီဇယ် သုံးဖြစ်တာကြောင့် ရေရှည်ကုန်ကျမှုစရိတ်ကိုအထူးလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်...5kVA-1000KVA အထိ အိမ်သုံးလုပ်ငန်းသုံးရရှိနိုင်ပါသည်....အခြားမီးစက်များနှင့်မတူပဲ အသံကျယ်လောင်မှုကိုလျော့ချထားမှုကြောင့်သုံးစွဲသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည့် မီးစက်များဖြစ်ပါတယ်.. တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့သွားစေရန်အတွက် ကျွန်တော်များ Royal Harcules Power မှ တာဝန်ယူပါတယ်......Company မှ ၀န်ဆောင်မှုအနေနဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက် installation လုပ်ပေးခြင်းနှင့် သက်မှတ်ကာလအတွင်း Free Service ပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ပါဝင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။.
Y Three phase AC motor is newly designed in conformity with the relevant requirements of IEC standard.Y series motors have outstanding performance, such as high efficiency, energysaving, high starting torque, low noise, little vibration,reliable operation and easy maintenance, etc.Y series motors are widely used in many places, where there doesn&#039;t exist combustible, explosive or corrosive gas, and without any special requirements, such as machine tools, pumps, fans, transport machinery, mixer, agriculture machinery and food machines, etc.Ambient temperature: -15 °C -40 °C . Altitude should be higher than 1000metres above sea level. အသံဆူညံမှုနဲပြီးတုန်ခါမှုအနိမ့်ဆုံးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
HCFC and HFC Condensing Unit
Our hermetical sealed scroll condensing unit,semi-hermetical sealed scroll condensing unit, semi-hermetical double piston compressor condensing unit,and semi-hermetical screw condensing unit and parallel units areanew series condensing units. Which were designed and produced with great experience and which synthesize the advantageous designs of other products.Our products are safe and reliable, environmental and energy-saving. They can be used in the fields such as: commerce, industry, agriculture, animal husbandry,medicine, chemical production, metallurgy, food and artificial climate control. The temperature evaporation temperature range is -60℃ to 10℃. Furthermore, we provide the condensing unit according to customer’s requirements.
Auto Voltage Regulator (Generator Control)
80200 ~ 80200 Kyats
Volume: 0.002CBM G/N W.: 0.55/0.45KG Warranty: 1 Year Packing: Carton
P88-6 generator (လုပ်ငန်းသုံးမီးစက်)
The 24 - 220 kVA range provides reliable power for today&#039;s world withacompetitive offering that delivers everything you need. Providing unrivalled quality, the 24 - 220 kVA range of products offersatrusted performance with an enhanced choice of options, optimising the range foravariety of diverse applications and environments. Designed with the demands of today&#039;s world in mind, this range will deliver power solutions in all sectors, from industry and retail to finance and healthcare.
Grundfos NB Single Stage End Suction, Non-self priming centrifugal pumps are used for pumping thin, clean or slightly contaminated liquids without abrasive or long-fibred solids. NB Pumps are multi-purpose and suitable foravariety of different applications that require reliable and cost-efficient running. NB pumps are suitable for the following applications: • water supply • industrial pressure boosting • industrial liquid transfer • HVAC • irrigation
ကျွန်တော်တို့ Asia General Electric Holding Co.,Ltd မှ ထုပ်လုပ်သော Marshalling Kiosk Panel များသည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်းများနှင့် အညီ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤ Marshalling Kiosk Panel တွင် Control Metering System ပါရှိပြီး ဆက်သွယ်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ဝါယာလုပ်ဆောင်ချက်များအကြားတွင် စီစဉ်ထိန်းချုပ်ပေးထားသည်။ တံခါးကို box ၏ အရှေ့မျက်နှာစာတွင် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် input, output တို့ကို အလွယ်တကူပင် ပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင် ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း လွယ်ကူစွာပင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Panel Box ၏ အောက်ခြေလမ်းကြောင်းမှ ကြေးနန်းကြိုးများ သွားလားနိုင်ပါသည်။ Cable connection ဝင်လမ်းများကို Box ၏ အရှေ့ သို့မဟုတ် အနောက်တို့မှ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မြေညီ ကြမ်းပြင်တွင် ထောင်ထားရန်အဆင်ပြေသည့်အပြင် အဆောက်အဦးထဲတွင် ထား၍ အသုံးပြုနိုင်သလို အပြင်ဘက်၌ထား၍ အသုံးပြုရန်အတွက် အကြမ်းခံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားသောကြောင့် လုံခြုံ၊ စိတ်ချ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Doosan Generator 360kw/450kva
Composed of Doosan diesel engine and Stamford alternator 2. 24V DC start motor and storage battery 3. Brushless, Self-excited, IP23, insulation class H alternator 4. 40°C radiator as standard, 50°C is optional 5. Key start panel control system as standard, digital auto-start panel is optional 6. Optional open type or silent type 7.All generator sets are gone through rigorous testing before being released to the market place, including 50% load, 75% load, 100% load , 110% load and all protection function (overspeed stop, high water temperature, low oil pressure, battery charging fail, emergency stop)